Warfare and Conflict | Dr Ko Ko Gyi's Blog
လက်တစ်ဖက်တစ်ချက် ထဲ “နေ” နဲ့ “လ” ကို ပေးအပ်မယ်ဆိုရင်တောင် အစ္စလာမ်ဘာသာ ကို စွန့်လွှတ်မှာ မဟုတ်ကြောင်း
ဒေါက်တာ ကိုကိုကြီး ရဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ နဲ့ comment တစ်ခုကို
ကုလားဘုန်းကြီး က ဗမာအိမ်ရှင် ဖြစ်သွားနိုင်တယ်၊
ကုလား ရှီအဟ် စိန်ဝင်း က မြန်မာနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။
ကုလား မောင်ဒီ က ဒုတိယဝန်ကြီး ဖြစ်ခဲ့တယ်။
လောကီ စည်းစိမ်ချမ်းသာအကျိုးတွေ အတွက် ၉၉ % ကျော် မွတ်စ်လင်မ်တွေဟာ အစ္စလာမ်ဘာသာ ကို စွန့်လွှတ်မှာ
လက်တစ်ဖက်တစ်ချက် ထဲ “နေ” နဲ့ “လ” ကို ပေးအပ်မယ်ဆိုရင်တောင် အစ္စလာမ်ဘာသာ ကို စွန့်လွှတ်မှာ မဟုတ်ကြောင်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တမန်တော်မြတ်ကြီး (Peace be upon Him) က မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။
Tags:Activism and Peace Work, Peace, Warfare and Conflict, WordPress, Yint Thitsar
Source: မြန်မာ မွတ်စလင် တို့၏ မျိုးချစ်သမိုင်း from Myanmar Muslim news
Tags:Asia, Burma, Muslim, Myanmar, Warfare and Conflict
Myanmar Government should start to take action on those who propagate hatred speeches
ဓါး ကို ဓမ္မ နဲ့ ကာကွယ်ကြ …
Present Myanmar Government should start to take action on those who propagate hatred speeches against other religious groups.
They are actually trying to burn the palace by starting to set fire on the trash or rubbish.
They just pretend to say that it is needed to clean up to protect the race and religion.
This is clear case of Xenophobia and they are trying to start crimes against humanity with their genocide ideas of ethnic cleansing.
Tags:Crime against humanity, Ethnic cleansing, History, Warfare and Conflict
Tags:Warfare and Conflict